Miaina ny rivotra - Church of the World of God Switzerland
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Mamofona ny rivotra
Ny apostoly Paoly dia mamaritra ny fiainana ao amin’ny Fanahy Masina amin’izao teny izao: «Fa izay araka ny nofo dia araka ny nofo; fa izay araka ny fanahy kosa dia misaina araka ny fanahy. Fa ny maha-nofo kosa dia fahafatesana, ary ny ara-panahy dia fiainana sy fiadanana » (Romana 8,5- iray).
Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatin’izay mino ny filazantsara, dia ny vaovao mahafaly. Mamoa voa eo amin’ny fiainan’ny mpino io fanahy io: “Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, ​​fahamarinana, fahalemem-panahy, fahadiovana; tsy mandrara na inona na inona amin’izany ny lalàna» (Galatiana 5,22- iray).
Ity voankazo ity dia tsy mamaritra ny fomba fiainantsika rehefa mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, mamaritra ny toetran'Andriamanitra sy ny fomba itondrany antsika.
«Isika efa nahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika: Andriamanitra dia fitiavana; ary izay mitoetra amin’ny fitiavana dia mitoetra ao amin’Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy.”1. Johannes 4,16). Tonga eto isika hamokatra io voankazo io, mba ho fitahiana ho an’ny manodidina antsika.
Iza no tiantsika holazaina amin'ny fiainantsika ara-panahy? Mifoka ny fofonain'Andriamanitra. Ny fiainana ao anaty Fanahy - ny fiainana niaina tamin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra.
Manana fiainana mendrika sy mahafa-po indrindra isika rehefa mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, izay fofonaintsika ara-panahy. Koa mahatsiaro ho velona sy mihatanjaka isika.